Ido nsọ pụtara na-eso ụzọ ngosi nke Jesus | Apg29
Ido nsọ pụtara na-eso ụzọ ngosi nke Jesus
Nsọ na nzọpụta ma ọ bụ ziri ezi, abụghị otu.
Salvation ma ọ bụ ziri ezi, na-ewe ebe nke abụọ anyị na-atụgharị na Jizọs, na ọ na-akpali n'ime obi anyị. Ido nsọ Otú ọ dị, a na ndụ usoro, ebe anyị na-eje ije na Jizọs maturing dị ka ndị mmadụ na Ndị Kraịst, Jizọs nwere ike ịbụ ihe ọzọ na ndị ọzọ anya n'ime na site na ndụ anyị, mgbe ụwa na anụ na-aghọ obere edu ike ná ndụ anyị.
The okwu nsọ ma si Old Testament Hebrew "Kadas" na NT okwu Grik "hagiasmós", otú ahụ okwu nsọ a nkewa site n'ụwa na "mmụọ". Nke a pụtara a nkewa site na nke dị unholy arụọ, na na kama ịbụ set iche maka Chineke n'ihi na na nke bụ nke Ya.
John na-eme ka a nkọwa nke ihe okwu ụwa bụ n'ihi na 1 Jọn 2: 15-16
" Ịhụnanya bụghị ụwa, ọ dịghịkwa ihe ndị na-na ụwa. Ọ bụrụ na onye ọ bụla ahụ ụwa n'anya abụghị ịhụnanya Nna ya. N'ihi na ihe niile dị n'ụwa, anụ ahụ na ọchịchọ nke anya na na nganga nke ọma ná ndụ, ọ bụghị site n'aka Nna ma site n'ụwa. "
Na Galeshia 5: 16-21 Paul na-ekwu okwu banyere ọrụ nke anụ ahụ, nke na m ga-abịa n'okpuru okwu ụwa na ya "mmụọ," Pọl kwuru banyere nke a: ịkwa iko, adịghị ọcha, lasciviousness, ikpere arụsị, ịgba afa, ibu iro, esemokwu, ekworo, iwe ọkụ, Ise-okwu, esemokwu, ozizi nduhie, echiche ọjọọ, ịṅụbiga mmanya ókè, ndụ ịla n'iyi. Aka na aka na Bible na-akụzi na ido nsọ, dị ka Bible na-ekwu banyere ndị na-nabatara na Jizọs Kraịst dị ka Onye Nzọpụta ha na Onyenwe anyị, na onye dị nsọ: Ndị Rom 1: 7 "... unu hụrụ n'anya nke Chineke, ya kpọrọ ịbụ ndị nsọ," 1 Ndị Kọrịnt 1: 2 "ka chọọchị nke Chineke na Corinth, ndị e doro nsọ na Kraịst Jizọs, ha kpọrọ ịbụ ndị nsọ ... ndị Efesọs 1: 4" dị ka ọ na tutu ntoala nke uwa họọrọ anyị ka anyị na ya na anyị ga-adị nsọ na-enweghị ụta n'ihu ya ".
The Bible na-ekwu n'ọtụtụ ebe banyere aga n'ihu nsọ usoro.
1 Ndị Tesalonaịka 5:23 na-ekwu, , "May Chineke nke udo + doo unu nsọ n'ụzọ zuru ezu ..." 2 Ndị Tesalonaịka 2:13 na-ekwu, "... site nsọ nke Mọ Nsọ na okwukwe nke eziokwu", Hibru 2:11 na-ekwu okwu Jizọs nke na-edo nsọ na ndị na- nsọ. The okwu doo anyị: John 17:17 "Kwadebenụ ha na ezi-okwu; okwu gị bụ eziokwu."
The kwere ekwe na-eme ka ya onwe ya dị maka ọrụ nke ịdị nsọ ná ndụ ha: 1 Ndị Tesalonaịka 4: 7,8.
Anyị ga-chebe mmehie ná ndụ anyị! ma, mgbe Mmụọ Nsọ na-atụ aka ọmịiko anyị mere, anyị na-ekwupụta n'ihu Chineke, mgbe ahụ, Chineke ga-agbaghara anyị na sachapụkwa anyị ezi omume nile. 1 Jọn 1: 9
Anyị na-akpọ a ndụ nke ịdị nsọ
" Chineke na-akpọ anyị ka anyị na-adịghị ọcha, ma na-a ndụ nke ịdị nsọ. Ya mere, ọ bụ ugbu a na-ajụ a dịghị ajụ nwoke ma Chineke, onye nyere gị mmụọ nsọ ya. " 1 Nke 4: 7, 8
Na Rom 6:19 na-agba anyị na-arịọ anyị so na-eje ozi nke ezi omume, ịdị nsọ, na 2 Ndị Kọrint 7: 1 na-agba ume ka anyị na-iyi Chineke-emezu ịdị nsọ.
M na-eche ezi egwu Chineke bụ ihe dị ike ná ndụ nke ndị kwere ekwe na-achọ ịdị nsọ ná ndụ ha. Ihe m chọrọ ike mesie!
Na ìhè nke Chineke nso a mụrụ a ezi egwu Chineke bụ.
O kwesiri ùgwù, irubere, nrubeisi, na obi anyị dị umeala ekele na efe ofufe.
Ọ dị oké mkpa ka ọ ghara ịga megide ma na-eleghara, mgbe Mmụọ Nsọ na-egosi na anyị ihe na Okwu ahụ, mgbe Chineke na-enwu na ihe ebe ọ chọrọ ịhụ a mgbanwe ná ndụ anyị. Mgbe Chineke na-ekwu; Nke a na-adịghị na-amasị m, ka m chọrọ ka ị kwụsị, ma ọ bụrụ na n'oge ndị dị otú ahụ, dị nnọọ ileghara ya anya, ma ọ bụ na-eche, ọ bụghị otú ize ndụ, ewute mmụọ nsọ Chineke. "Ọ bụghị Chineke nwee mwute Mọ Nsọ, Onye ị natara dị ka akara maka ụbọchị nke mgbapụta." Ndị Efesọs 4:30.
Ọ bụrụ na ọ bụ ogologo oge mgbe ị na-eleghara Jehova na-ekwu, ndị na-erughị ha chere dị ka Mmụọ ala-isi olu otu n'ime, otu na-aghọ "blunted". Ọ na-ekwu mgbe nwayọ n'ime anyị.
M ga-enye ihe atụ si na m ndụ. Tupu mgbe m lere anya kwa mgbe na TV. M bụ mgbe ahụ doro nnọọ anya na ahụmahụ mgbe m hụrụ na ụfọdụ TV mmemme, ma ebe ọ bụ ihe rụrụ arụ ma ọ bụ nwere ihe ọ bụla na-adịghị ọcha ihe, otú Mmụọ Nsọ n'ime m zara na ghọrọ okop mfụhọ. Ọ pụrụ ịbụ ihe atụ ihe na-akpali akpali cop show omume ma ọ bụ ihe nkiri na na m hụrụ na-akpali, na dị ka m na-ele ya. Mgbe ọ gafere a ogologo oge, na m leghaara Mmụọ Nsọ ịdọ aka ná ntị, ma nọgide na-na-ahụ na ndị dị otú ahụ a usoro ihe omume, otú ahụ ka m turu ime aba dị ka o doro anya na Mmụọ Nsọ si ala-key ịma aka. M hụrụ aba otú o wee okop mfụhọ.
Gịnị mere? Ọfọn, ihe mere bụ na obi m na a na-blunted na ikwu na ịdị nsọ nke Chineke! Spirit olu na na kpọmkwem ihe fọrọ nke nta kwụsị. appallingly
Ugbu a ọ ga-abụ ihe dị nnọọ nta na-ele tiivi. Na-eche na anyị niile nwere ebe na Mọ nke Chineke na-egosi na ọ dịghị ihe na-amasị ya, na ebe anyị kwesịrị ichegharị.
Help na nsọ usoro dị. Anyị maara iji niile ugboro ole anyị nwara, ha onwe ha na mgbalị ghọọ ndị ọzọ "nsọ nsọ" nsọ Kraịst, ma ihe anyị na-eme nke a. Anyị na-echefu, ma ọ bụ amaghị otú Chineke na-enyere anyị na nsọ usoro.
Na Ezekiel 11:19, 20, anyị na-agụ
" M ga-enye ha otu obi, na mmụọ ọhụrụ m ga-etinye n'ime ha. M ga-ewepụ nkume obi nke anụ ahụ ha na-enye ha obi ha nke anụ ahụ, na ha ga na-ejegharị ụkpụrụ m, na-edebe ihe m nyere n'iwu, na-eme ha. Ha ga-abụ ndị m, m ga-abụkwa Chineke ha "
na na Hibru 8:10, anyị na-agụ otu nkwa ahụ. Galeshia 5:16 "Ihe m chọrọ ikwu bụ nke a: Walk na Mmụọ Nsọ, ị ga-abụ abịa nke anụ ahụ," na amaokwu 25, "Ọ bụrụ na anyị na-adị ndụ site na mmụọ nsọ, ka anyị na-eje ije na Mmụọ Nsọ."
Ọ ma m onwe n'ụzọ doro anya kwuru na m na nke a ọchịchọ nke ịbụ ndị ọzọ dị ka Jizọs na-eto, ọ bụ okwu ndị nke Jizọs na Jọn 15. N'ebe a, Jizọs na-ekwu banyere onwe ya dị ka ezi osisi vine / ezi osisi vine. Ọ na-ekwu na ọ bụ naanị site na anyị na-erube na Ya onye bụ vine, mkpụrụ osisi ga-eto eto. Ọ na-ekwu na site förblivandet na vine ga-alaka ụlọ ọrụ (vi) iburu ọgaranya mkpụrụ. Jizọs kwukwara n'amaokwu nke 5 "... enweghị m unu nwere ike ime ihe ọ bụla."
Alaka ike ike ma ọ bụ mgbalị afanyekwa ọ bụla mkpụrụ.
Mmụọ ọrụ nke amara anyị, na-ewe ebe ke Community of Jizọs n'onwe ya.
M na-eche na-enye ndụ sap nke osisi vaịn, nke na-emepụta mkpụrụ, mkpụrụ vaịn, m na-eche na ọ nwere ike sị a na foto nke Mmụọ Nsọ, ya vibrant ndụ.
Mkpụrụ nke Mmụọ Nsọ kwuru na Ndị Galeshia 5:22. Note na mkpụrụ nke mmụọ nsọ , nke na-abụrụ. Ọ dịghị ihe ùgwù na-aga n'alaka ụlọ ọrụ na-agba mkpụrụ. Ma alaka nānọ vine eme nke mere na ọ nwere ike na-eto eto mkpụrụ.
Anyị na-ahụ na Bible na zoputara ike ibi ndụ n'ụzọ kwekọrọ na onye chọrọ, ma na-eleghara ihe Mọ Nsọ nke Chineke site n'Okwu agwa anyị okwu. Anyị na-akpọ Jizọs ka mbet "O wee kpọọ ndị na-eso ụzọ ya wee sị ha: Ọ bụrụ na onye ọ bụla ga-abịa mgbe m, ka ya ju onwe-ya buli kwa obe-ya, na-esokwa m." Kaa 8:34.
Ga-akwụsị mgbe a okwu si Filipaị 4: 8, nke aghọwo otú ndụ m
" Ọzọkwa ụmụnna (na ụmụnna nwanyị), ihe niile ahụ bụ eziokwu ma dị ùgwù, dị nnọọ, dị ọcha, ihe ọ bụla bụ ọmarịcha, na nke estimating, ee, ihe nile a na-akpọ omume ọma na kwesịrị inye otuto, na-eche na ihe ndị a."
My mgbakwunye: ndụ n'ihi ihe ndị a, na-ekwu ihe ndị a.